Global Voices Sy Ny Del.icio.us · Global Voices teny Malagasy
Global Voices Sy Ny Del.icio.us
Voadika ny 24 Oktobra 2017 16:41 GMT
(Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia nivoaka tamin'ny volana Novambra 2004)
Ho fanampin'ilay mpanangona noforonin'i Rebecca ao amin'ny Global Voices, faniriako ny hanasa anao hizara ireo rohy avy amin'ny vohikala izay eritreretinareo fa ilaina amin'ny adihevitra ataontsika amin'ny alalan'ny fampiasana ny del.icio.us. Atomboko amin'ny andianà tsoratadidy (bookmark ) ary manasa anareo aho hanao toy izany koa, amin'ny fampiasana ny del.icio.us, sy fanamarihana ireo tsoratadidy ho toy ny “globalvoices”.
Ho an'ireo izay tsy nampiasa azy: ny Del.icio.us dia “mpitantana ireo tsoratadidy sosialy”. Ahafahanao mitantana ny andianà tsoratadidy ety anaty aterineto sy mizàra azy ireny miaraka amin'ireo mpampiasa hafa. Afaka mijery ireo vohikala izay nasianao tsoratadidy sy ireo sokajy nanokànanao azy ireny. Raha vao manorina sokajy iray toy ny “globalvoices” fotsiny ianao – tonga dia mifandray avy hatrany amin'ireo angona sasany hafa manana anarana hoe “globalvoices” noforonin'ireo hafa mpampiasa del.icio.us izy ireo.
Mba hanandramana azy io, mankanesa ao amin'ny del.icio.us, ary manokafa kaonty iray. Araho ireo toromarika rehetra amin'ny fahazoana ny del.icio.us “bookmarklets” ho eo amin'ny fitety tranonkalanao. Atodiho mankaminà vohikala iray mifanaraka amin'ny adihevitra Global Voices ny fitetinao. Ampiasao ny bookmarklet “alefaso mankany amin'ny del.icio.us” mba hampidirana an'io vohikala io amin'ny tsoratadidy del.icio.us noforoninao. ao anatin'ny faritra ho an'ny “tags”, ampio ny hoe “globalvoices”, avy eo ho afaka hahita ny tsoratadidinao avokoa izahay ambiny rehetra.
Isaky ny URI nomena famantarana ho “globalvoices” dia afaka hita avy aminà pejy tokana – somary foana hatramin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, nefa mety ho feno izany rehefa mandray anjara avokoa isika rehetra.
16 ora izayAzia Atsimo